Yakanakisa Kuchenesa mota Set Mugadziri uye Fekitori | Aosheng
Mota yekuchenesa set inosanganisira zvimwe zvinoraswa zvigubhu zvemota, senge chivharo chinogadziriswa chevhiri, vhiri remarara rinoraswa, chivharo chinogadziriswa chegiya, chivharo chebhureki rekurasa ruoko, chivharo chemarara, kurasa kiyi bhegi uye magurovhosi anoraswa.
✦ Chinyorwa: Pe epurasitiki kana bepa.
✦ Ruvara: Transparent kana chena.
✦ Apex: kuraswa kavha muhombodo imwe izvo zvakakwana kuti imwe nguva kushandiswa.
✦ Inogona kushandiswa kuchengetedzwa kwemotokari nyowani, kugadzirisa mota, kana kudzivirira kubva mukusvibiswa.
Bag Bhegi diki rinogona zvakare kutengeswa kuchitoro chekushandisa pamba.
✦ Mari, yakachena uye nyore.
Mutengi wevatengi aigona kudhindwa pane kurongedza bhegi. Mota yekuchenesa set inogona kushandiswa kuchengetedza mota nyowani, kugadzirisa mota, kana kudzivirira kubva mukusvibiswa. Bhegi diki raigona zvakare kutengeswa kuchitoro chekushandisa pamba. Iyo ine mari, yakachena uye iri nyore. Qingdao Aosheng Plastic Co., Ltd ari nyanzvi gadzira ane makore anopfuura makumi maviri 'ruzivo kuburitsa Pe epurasitiki masking Zvigadzirwa. Kana iwe uine chero dambudziko, usazeze kutitaurira. Nomwoyo wose tariro pamwe nemi.
►Car yekuchenesa set inosanganisira zvimwe zvinoraswa zvigubhu zvemota, senge chivharo chechigaro chinoraswa, kavhiri kevhiri, kuraswa kwetsoka, kuraswa kwekuvhara giya, chivharo chebhureki rekurasa ruoko, kurasa tiravha, kurasa kiyi bhegi uye magurovhosi anoraswa.
►Zvose zvivharo zvinoraswa zviri muhomwe imwe izvo zvinokwana kushandiswa kamwe chete.
►Iyo yakakwana yekuchengetedza yevatengi mota.
►Iyo yekuchenesa mota inogona kushandiswa kuchengetedza mota, kugadzirisa mota, kana kudzivirira kubva mukusvibiswa.
Details: Paint vaiitawo mukombe
- Pe epurasitiki zvinhu kana bepa zvinhu.
- Bhegi rimwe raigona kuzadzikisa nemotokari imwe mukushandisa kamwe chete.
- Zvehupfumi. Sevha Basa, nguva nemari.
Pe / Pepa
Zvese muhombodo imwe, 200bags / bhokisi
Ongorora: Chigadzirwa chinogona kuitwa maererano nechikumbiro chavatengi chakakosha
A: 30000 mabhegi mune imwe nguva.
Mubvunzo: Ndezvipi zvigadzirwa zvako zvakajairika?
A: Kazhinji, seti inozivikanwa inosanganisira 1 chidimbu chebutiro rekugara, 1 chidimbu chevhiri rekuvhara vhiri, 1 chidimbu chetsoka tsoka, 1 chidimbu chegiya rekuchinja chifukidziro uye 1 chidimbu chebhureki reruoko.
Pashure: Mota Chipurasitiki Chekuvhara Cover
Zvadaro: Paint Kusanganisa Mukombe